Jimco, Jan 22, 2021-Dadaallo lagu xalinayo khilaafka doorashada oo socda – LaacibOnline
Jimco, Janaayo, 22 2021 (HOL) – Waxaa soconaya dadaallo la doonayo in xal kama danbeys ah looga gaaro muranka doorashada iyadoo mudo xilkeedka dowladda hadda jirta ay ka harsan tahay wax ka yar 20 cisho.
Wakiilada beesha caalamka ayaa maalmihii ugu danbeeyayba kulamo gaar gaar ah oo dhinaca Internet ah waxaa ay la lahaayeen qaar ka mid ah madaxweynayaasha dowlad gobolleedyada oo ay ka wada hadleen arrimaha doorashada iyo waliba sidii xal kama danbeys ah looga gaari lahaa khilaafka jira.
Dhinaca kale kulan khadka talleefoonka ah oo dhaxmaray madaxweynayaasha shanta Dowlad gobolleed ee kala ah Puntland, Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa looga wada hadlay sidiii ley sugu soo dhawaan lahaa, iyadoo la tixgalinayo waqtiga ka harsan muddo xilkeedka dowladda hadda jirta
Beesha caalamka ayaa markan u muuqata mid dhinacyada oo dhan cadaadis ku saareysa in xal kama danbeys ah laga gaaro arrimaha doorashada iyadoo leysugu imanaya shir arintan looga wada hadlayo.
Dowladda Soomaaliya ayaa wajaheysa cadaadis uga imanaya dhinaca beesha caalamka kuwaa oo sheegay in maadaama waqtigu gabo-gabo yahay qasab tahay in la qabto doorasho ay raali ka wada yihiin dhinacyada saameynta ku leh oo dhan iyadoo dhinaca kalana la tixgalinayo cabashada maamulada qaar iyo musharixiinta ka qabaan hanaanka ay dowladdu wax ku waddo.
← Coronavirus vaccines will be available to immigrants in Canada
Jimco, Jan 22, 2021-Khadiijo Maxamed Diiriye ” Farmaajo waa madaxweynaha kaliya oo ay caddahay in uu mar kale dib u soo noqonayo →
Axad, Nov 8 , 2020-Sheekh Cali Wajiis ” Xaliimo Yareey waxey beennisay Aayado Qur’aan ah